कोरोना भएपछि छोराछोरीले आमालाई सडकमा फा’लिदिए, महिलाको मृत्यु – Sapana Sanjal
April 26, 2021 160
अ’प्ठेरो बेलामा हो मानिसको मानवता चिन्ने । ९ महिना कोखमा राखेर हुर्काएकी आमालाई कोरोना को आशंकामा छोरा छोरीले नै घर वाहिर सडकमा अल पत्र नि का लि दिएका छन् । यो घटना भारत कानपुरमा भएको हो । महिला बाँया कलयुगीलाई उनका छोराले घरवाट बाहिर नि का लि दिए ।
असहाय महिला घ’ण्टो सम्म चर्को घाममा सडकमै देखेपछि प्रहरीले उद्दार गरेर अस्पताल भर्ना गराएको भएपनि उनको मृत्यु भएको छ । प्रहरीले उक्त महिलालाई उर्सला अस्पतालमा भर्ना गरेको थियो उपचारका क्रममा उनको मृत्यु भएको छ ।
६२ बर्षे ति महिलाका महिलाको पति, श्याम यादव ले फ्टि ने न्ट कर्नलको पदबाट सेवानिवृत्त थिए । केही वर्ष अघि उनको मृत्यु भएको थियो जसपछि राज लक्ष्मी क्यान्ट क्षेत्रको म’क्कु पुर्वामा छोरा विशालसँग बस्दै आएकी थिइन् ।
पछिल्लो धेरै दिनदेखि राज लक्ष्मीलाई ज्व’रो आएको थियो । सास ‘फेर्न पनि गा’ह्रो थियो । कोरोना हुने डरले उनका छोरा विशालले उनलाई च के रीको ता ड बग्लिया क्षेत्रमा रहेको बहिनीको घरबाहिर सडकमै छो’डेर गए ।
छोरी र ज्वाईले पनि न त ती महिलाको उपचार गरे र न घरमा उनीलाई भित्र लिएर आए ।
सडकमै ल म्प सार परेर महिला घाममा रहीन् । जब स्थानीय मानिसहरूले उनको भिडियो भाइरल बनाए, पुलिस घटनास्थलमा पुग्यो ।
चा के री प्रहरीले स्वास्थ्य विभागको टोली बोलाएर उक्त महिलालाई ह’लत अस्पताल पठाइदिए जहाँ उपचारको क्रममा महिलाको मृत्यु भयो ।
भारतमा गत २४ तीन लाख ५२ हजारभन्दा बढी नागरिक कोरोना भाइरस सङ्क्रमित भेटिएका छन् । एकै दिन तीन लाख भन्दा बढी कोरोना भाइरस सङ्क्रमित भेटिएका यो पाँचौ दिन भएको बताइएको छ ।
Prevसुन किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ ? यस्तो छ, बजारमा सुनको भा’उ?
Nextयस्तो छ तपाईको मंगलबारको राशिफल, पाथिभरा माताको दर्शन गरी बैशाख १४ गतेको राशिफल हेर्नुहोस्